Barcelona Oo Guul Weyn Ka Gaadhay Girona, Lionel Messi Oo Wacdaro Dhigay & Coutinho Oo Shabaqa La Saaxiibay – Laacibnet.net
Barcelona Oo Guul Weyn Ka Gaadhay Girona, Lionel Messi Oo Wacdaro Dhigay & Coutinho Oo Shabaqa La Saaxiibay
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa guul weyn ka gaadhay kulan saaxiibtinimo oo ay iskugu diyaarinayeen xili ciyaareedka cusub oo 27ka bishan ugu bilaaban doona kulan adag oo ay isku haleeli doonaan Villarreal oo ugu iman doonta Camp Nou.
Barcelona ayaa garoonkeeda ku qaabishay kooxda ay isku gobolka yihiin ee Girona, waxaanay ku karbaasheen 3-1 uu laba ka mid ah goolasha dhaliyey Lionel Messi iyo Philippe Coutinho oo midka saddexaad saxeexay.
Coutinho ayaa furay gool-dhalinta bilowgii ciyaarta kaddib markii uu shabaqa ku leexiyey kubbad loo hor dhigay goolka oo cidlo ah, waxaana mid labaad ku daray Messi ka hor intii aan loo bixin waqtiga nasashada.
Girona ayaa daqiiqaddii koowaad ee bilowga qaybta dambe la timid hal gool oo daqiiqado kooban kaddib uu Lionel Messi ka daba keenay goolka saddexaad.
Tababare Ronald Koeman ayaa kusoo bilaabay shax adag oo uu ugu guuleysan karayo kulankan, taas oo ay hoggaaminayeen Lionel Messi, Coutinho iyo Antoine Griezman oo kusoo wada bilowday shaxda koowaad, halka Luis Suarez aan gebi ahaanba lagu soo darin oo aanu beddelkana kasoo muuqanain.
Xiddiga reer Brazil ee Coutinho oo ikasoo laabtay amaah uu xili ciyaareedkii hore ugu maqnaa Bayern Munich ayaa gool-dhalinta u furay Barcelona, waxaana kubbad uu kasoo shaqeeyey Lionel Messi uu goolka u hor dhigay Antoine Griezmann oo isaguna u hibeeyey Coutinho.
Barcelona ayaa heshisay fursado ay goolal kale ku dhalin karaysay, waxaase ay goolka labaad heleen daqiiqaddii 45aad ee dhamaadka ciyaarta oo Lionel Messi uu kubbad uu ku toogtay lugta midig uu kusoo dhuftay birta, taas oo kusii leexatay shabaqa.
Goolkan ayaa ahaa mid uu lugtiisa midig ugu adeegsaday si la mid ah lugtiisa bidix oo uu toogtay meel goolhayaha ka fog, isaga oo taagnaa masaafo durugsan oo xerada ganaaxa bannaankiisa ahayd.
Daqiiqaddii koowaad ee qaybta labaad ayay Girona heshay gool madi ah oo aanay waxba uga dambaynin oo uu u dhaliyey Samu Saiz, laakiin ma ahaanin mid sii waara, waxaana ka daba yimid Lionel Messi oo dhaliyey goolkiisa labaad ee kulanka, sidoo kalena ahaa goolka saddexaad ee kooxdiisa.
Tababare Ronald Koeman ayaa markii uu isku hubsaday guusha, waxa uu beddelay dhamaan 10kii ciyaartoy ee gudaha ku jiray daqiiqaddii 68aad, waxaana kaliya uu kasoo reebay goolhaye Neto.
Ciyaartoyda beddelka kusoo galay oo uu hormood u ahaa Ousmane Dembele ayaan waxba ka beddelin natiijada ciyaarta oo kusoo dhamaatay 3-1 ay guushu ku raacday Barcelona.
Guul guul barca